लोकमान प्रकरणपछिको अख्तियार- विचार - कान्तिपुर समाचार
सूर्यनाथ उपाध्याय र दिपेश घिमिरे
लोकमान प्रकरणपछिको अख्तियार
फाल्गुन ६, २०७३ सूर्यनाथ उपाध्याय र दिपेश घिमिरे
आफ्नै कामकारबाहीले गर्दा अख्तियारबाट डराइरहनुपर्ने नेतृत्वले दृढतासाथ काम गर्न सक्दैन ।
२०७३ पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले लोकमानसिंह कार्की विरुद्धमा परेको रिट निवेदनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको लागि उनको योग्यता नपुगेको फैसला गर्‍यो । यसैगरी संविधान बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तको पदमा सिफारिस र नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद् र राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशसंँगै लोकमान प्रकरणले तरङ्गित हुनपुगेको वातावरण शान्त हुनपुगेको छ । तर यस प्रकरणले भ्रष्टाचार निवारणको सन्दर्भमा केही गम्भीर विषय उत्पन्न भएका छन्, जसबारे सम्बद्ध सबैले ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ । भ्रष्टाचार निवारणको सन्दर्भमा आगामी दिनका लागि केही दिशाबोध पनि गरेको छ ।
वास्तवमा संस्था र व्यक्ति यी दुई बेग्लाबेग्लै विषय हुन् । लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता पुगेन, उनको नियुक्ति बदर भयो । विषय त्यो मात्र हैन, लोकमान निकायका प्रमुख हुन् । प्रमुखको क्रियाकलापले निकायको हैसियत उच्च हुने वा तल झर्ने हुन्छ, खासगरी यस्तो निकायमा जो ज्यादै संवेदनशील छ । एक त लोकमानकै पनि क्रियाकलापले गर्दा अख्तियारको केही अधिकारको कटौती संविधानले गर्‍यो र दोस्रो, लोकमानलाई महाभियोगको कारबाहीका लागि संसदमा प्रस्ताव पनि दायर गरिएकोबाट निश्चय नै अख्तियारको छविमा केही नकारात्मक प्रभाव परेको छ । मानिसहरू भन्छन्, अब अख्तियारको नैतिकबल कम हुन्छ । निश्चय नै यसमा केही सत्यता हुनसक्छ । तर विचारणीय कुरा के हो भने लोकमानको नियुक्तिदेखि सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति बदर गरिदिएसम्मका सबै क्रियाकलाप लोकमान एकजना व्यक्तिमा केन्द्रित थियो । उनको विगतको विवादास्पद व्यक्तित्व, उनको अचाक्लीपना, उनको योग्यता नपुग्ने विषय, उनको सार्वजनिक सेवाको अवधि र उच्च नैतिकताको अभाव यी यावत विषय व्यक्ति केन्द्रित हुन् । यसमा अख्तियारलाई एउटा संवैधानिक निकायको रूपमा बेग्लै हेरिनुपर्छ । हुन पनि अख्तियार स्वयं भित्रका क्रियाकलापमा पनि अन्य आयुक्तको संलग्नता नरहेको कुरा सञ्चार माध्यममा आइसकेकै छ ।
लोकमानका क्रियाकलापमा उनी एकजना र कुनै अर्को एकजना आयुक्तमात्र संलग्न हुने गरेको र पूर्ण आयोग संलग्न नरहेको भनी टिप्पणी भैरहेकोलाई असत्य भन्न पनि सकिँदैन । ६ जना आयुक्त रहेको ठाउँमा एकजना प्रमुख आयुक्तको मात्र विचारले निर्णय हुने हैन । लोकमानले आयोगको आन्तरिक कार्यविधि बमोजिम इमानदारीपूर्वक काम गरेको भए सायद यस्तो स्थिति आउने थिएन होला । तर त्यस्तो भएन । त्यसैले अख्तियारले एउटा निकायको हैसियतमा अझै पनि आफ्नो कालो छाया पखाल्न समय लाग्न सक्छ । केही गुमेको आस्था पुनस् प्राप्त गर्न सक्छ । अबका दिनमा कसरी काम गर्छ, त्यसमा भरपर्ने हो । वास्तवमा अख्तियारमा रहेका अन्य आयुक्तले लोकमान प्रकरणबाट पाठ सिकेर अख्तियारको आन्तरिक निर्णय प्रक्रियालाई बलियो र चुस्त बनाउन ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
सर्वोच्च अदालतले अर्को प्रमुख आयुक्त नियुक्तिका लागि परमादेश पनि जारी गरेको छ । यस सम्बन्धमा संवैधानिक परिषद्ले अब ठूलो पाठ सिक्नुपर्छ । अब नियुक्त गर्दा व्यक्तिको पूर्ण इतिहास केलाउनु आवश्यक छ । संवैधानिक परिषद्ले केही समय पहिले आयुक्तमा इच्छा राख्नेहरूले आवेदन दिने भनी आवेदनको ढाँचा पनि तयार गरेको थियो र आवेदन लियो पनि । वास्तवमा यस्तो गरिमामय पदमा नियुक्ति गर्नु भनेको कुनै व्यापारिक निकायमा नियुक्ति गरेजस्तो हैन । यसका लागि सार्वजनिक जीवनमा देखिएका अनुभव सिद्ध र राम्रो विगत भएकाहरूको खोजी नै गरेर नियुक्ति गर्नुपर्छ । यी कुरा सबै अनुशासनमा बस्ने, उपयुक्ततामा विश्वास गर्ने, प्रक्रिया र पद्धतिप्रति आस्था राख्ने व्यक्तिका लागि सामान्य लाग्छन् । तर हाम्रा राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई यस्ता विषयको कुनै अर्थ रहँदैन । आफ्नो पार्टीमा आस्था राख्ने, सहयोग गर्ने र सकेमा आफ्ना कार्यकर्ता नै बढी प्राथमिकतामा छन् । लोकसेवा आयोगबाट लिखित परीक्षा लिएर पास गरी आउने पदबाहेक अन्य किसिमले नियुक्त हुने प्रायस्जसो सबै नै नियुक्ति उपल्लो पदमा वा सानो पदमा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा गरिने कुरा एक किसिमले स्वीकार्य मापदण्ड नै भैसकेको छ ।
नेपालको संविधान अनुसार संसदमा दलहरूले प्राप्त साधारण मतको अनुपातमा मनोनीत सांसद पनि राख्न पाउने व्यवस्थाले आउँदा दिनमा कुनै एक दलको बहुमत हुन र त्यसको आधारमा सरकार निर्माण हुन निकै गाह्रो हुन्छ । फलस्वरुप २र३ दलबीच सत्तासाझेदारी हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सबै नियुक्ति राजनीतिक पार्टीहरूले आफूबीच भागबन्डा लगाएर नियुक्ति गर्नेछन् । यो हाम्रो नियति नै भैसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सर्वस्वीकार्य प्रमुख आयुक्त भेटिनै पनि मुस्किल हुन्छ । भागबन्डाको आधारमा नियुक्त प्रमुख आयुक्तसित नैतिकबल हुँदैन र त्यसकारण अख्तियारजस्तो निष्पक्ष र स्वतन्त्र संस्थाले आफ्नो स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई जोगाएर राख्न सक्दैन । त्यस किसिमको नियुक्तिबाट अख्तियारमा ३ किसिमको अवस्था देखिन सक्छ । पहिलो, त्यसरी नियुक्त व्यक्तिले कामै नगरी बस्छ । वा यो प्रभावी हुन सक्दैन । वा झिना—मसिना मुद्दामा अल्झिन्छ ।
दोस्रो, अख्तियारले राजनीतिक प्रतिशोधको भावनाले काम गर्न सक्छ र त्यस अवस्थामा अख्तियारले कुनै दलको निर्देशनमा काम गर्छ । र आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउँछ । तेस्रो, अख्तियार आफू स्वतन्त्र छु भनी देखाउन चाहिँदा—नचाहिँदा सबै क्षेत्रमा हात हाल्छ, बढी उत्साही भएर काम गर्छ र फलस्वरुप सरकारलाई त्यो घाँडो हुन्छ । सरकारका कामकारबाहीमा बाधा—अड्काउ पर्न जान्छ ।
अख्तियारलाई लोकमानबाट मुक्त गरियो, तर यसको साथसाथै अब यसलाई राम्रो संस्थाको रूपमा कसरी विकास गर्ने भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा देखापरेको छ । राजनीतिक भागबन्डाबाट माथि उल्लेख गरिएजस्तो स्थिति आउने ठूलो आशङ्का त छ । तर यसबाट मुक्तिका लागि के गर्न सकिन्छ त रु यसतर्फ विचार गर्दा दुइटा कुरा महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।
पहिलो, अख्तियार भित्रैबाट त्यसको सकेसम्म राम्रो उपाय निकाल्न सक्नुपर्छ । अख्तियारको आन्तरिक कार्यविधि यसको गतिलो उपाय हुनसक्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र नियमावली अनुसार अख्तियारको प्रशासनिक कामको जिम्मेवारी प्रमुख आयुक्तको भए पनि मुद्दासम्बन्धी निर्णय, थुनछेक र धरौटी सम्बन्धी निर्णयको अधिकारको सम्बन्धमा प्रमुख आयुक्तको हैसियत अरु आयुक्तजस्तै हो, विशेष अधिकार छैन ।
दोस्रो, आन्तरिक कार्यविधिले प्रक्रियात्मक कुरामा कम्तीमा २ जनामा आयुक्त र अभियोजनको सारभूत निर्णयमा सम्पूर्ण आयुक्तको बहुमतले नै निर्णय गर्नुपर्छ । यस व्यवस्थाले धेरै हदसम्म छेकबार र सन्तुलनको काम गर्न सक्छ । त्यसैले अख्तियारले आफ्ना आन्तरिक कार्यविधि नै यस्तो बनाउनुपर्‍यो, जसले गर्दा राजनीतिक आस्था वा व्यक्तिगत द्वेष वा रागले स्थान पाउन नसकोस् । अख्तियारको प्रभावकारिताको सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने अर्को पनि पक्ष छ । अख्तियारलाई सम्पूर्ण शासन व्यवस्थाका मेसिनरीहरूभन्दा फरक सोचिनु हुँदैन । यो पनि शासनयन्त्रको एउटा कडी हो । शासनयन्त्रले देशको आर्थिक विकास र उन्नतिका लागि काम गर्ने हो । आर्थिक विकास र उन्नतिलाई पछि धकेल्ने हैन । त्यसैले अख्तियार अन्य सम्बद्ध निकायसित बराबर सम्वादमा रहिरहनुपर्छ । शासनयन्त्रमा अख्तियार एउटा छुट्टै टापुको रूपमा रहन गएमा त्यसको नकारात्मक असर पर्छ । त्यसैले यसप्रति संवेदनशीलता आवश्यक छ । कतिपय अवस्थामा यस्ता संवेदनशीलताको अभावका कारणले विकास योजनामा र सरकारका कार्यक्रममा नकारात्मक असर पर्छ । यो दुर्भाग्य नै भन्नुपर्ला, देशमा त्यस्तो खालको नेतृत्वको अभाव भैरहेछ, जसले यी कुरा बुझोस् र देशलाई अगाडि बढाउन सकोस् ।
आफ्नै कामकारबाहीले गर्दा अख्तियारबाट डराइरहुनपर्ने नेतृत्वले दृढतासाथ काम गर्न सक्दैन । आपराधिक मनस्थितिको नेतृत्वले देश विकास सम्भव छैन । नैतिकबल नभएकोले अख्तियारसित डराउने मानसिकता बोकेको हुन्छ र त्यसको प्रतिछाया विकासमा पर्छ । अख्तियार र कार्यपालिका बीचको सम्बन्ध संवेदनशील हुन्छ, यो सम्बन्ध सन्तुलित तबमात्र हुन्छ, जब दुबैतर्फ नैतिकबल हुन्छ । सफलता र प्रभावशालिता अख्तियारको लागि जति आवश्यक छ, त्यति नै सरकारी संयन्त्रको लागि पनि छ । यी दुबैमा आत्मबलको खोजी आवश्यक छ । यो खोज शासनको प्रक्रिया र थितिको माध्यमबाट खोज्नुपर्ने आवश्यकता हो । यो नै यस्तो माध्यम हो, जसले राजनीतिक हस्तक्षेपलाई पनि कम गर्न सक्छ र अख्तियार वा अन्य निकायलाई पनि बलवान बनाउन सक्छ । यद्यपि यो सत्य हो कि लोकमानसिंह कार्कीको कार्यकालको अन्त्यपछि फेरि अख्तियारलाई आफ्नो बाटोमा ल्याउन केही समय त लाग्छ नै । तर कति लाग्ला भन्ने कुरा आगामी दिनमा सरकार र अख्तियारका आयुक्तहरूको कार्यशैलीमा भरपर्छ ।
(अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय र दिपेश घिमिरेद्वारा लिखित समाज र भ्रष्टाचार पुस्तकको अंश, पुस्तक आज सार्वजनिक हुँदैछ ।)
प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७३ ०८:४०
बाढीले भत्काएको नहर मर्मत
प्यूठान — वर्षायाममा आएको झिमरुक नदीको बाढीले क्षति पुर्‍याएको प्यूठान नगरपालिका १६, स्थित हरियाली सिंचाइ नहर मर्मतपछि पानी चलेको छ । नहर निर्माण भएर गहुँमा सिंचाइ गर्न पाइएको भन्दै किसान खुसी भएका छन् ।
‘नहर मर्मतपछि निकै खुसी लागेको छ,’ स्थानीय बिन्दु केसीले भनिन्, ‘हाम्रो माग सुनुवाइ भयो ।’ सिंचाइ गर्ने अरू कुनै विकल्प नभएकाले कात्तिकमा लगाएको गहुँमा माघको अन्तिम साता नहर मर्मतपछि सिंचाइ गरेको उनले बताइन् । उनका अनुसार नहर खोलाको भागसम्मै कटान गरेकाले स्थानीयले मर्मत गर्न सक्ने अवस्था थिएन । जिविस र सिंचाइ डिभिजन कार्यालयको सहयोगपछि स्काभेटर प्रयोग गरी नहर मर्मत गरेको उपभोक्ता समिति अध्यक्ष हिमबहादुर केसीले बताए । नहर बगाएपछि अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी, पूर्व गृहमन्त्री तथा प्यूठान क्षेत्र नं. १ का सांसद वामदेव गौतमले समेत क्षति पुर्‍याएको नहरको अवलोकन गरेका थिए ।
‘पुस्तौंदेखि सिंचाइ गर्दै आएको नहरमा यस वर्ष ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो,’ केसीले भने, ‘अब सिंचाइ गर्न पाइँदैन कि भन्ने लागेको थियो । नहर सुचारु भएको छ । निकै खुसी छौं ।’ नहरमा नदीले क्षति गर्दा तोरबाङ, लुङ, मरन्ठाना र धर्मावतीका किसान प्रभावित भएको उनले बताए । झिमरुक नदीले स्थानीय कालीबहादुर केसीको बारीसहित नहर बगाएपछि पानी रोकिएको थियो । उपभोक्ता समितिमार्फत जिविसबाट ५ लाख लगानीमा नहर सुचारु भएको हो ।
डा. प्रतिभा पौडेल